ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင် - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home ဗဟုသုတ ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်
သူ့ကြောင့် ပျော်ရတယ်။" "မင်းကြောင့် ပျော်ရတယ်။" ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေကို မကြာခဏဆိုသလို ကြားဖူးပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကြောင့် ကိုယ်ရရှိတဲ့အပျော်ဆိုတာ အဲဒီ့တစ်ယောက်ယောက် မရှိတော့တာနဲ့ ကိုယ့်မှာ မပျော်နိုင်တော့ဖူး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ အဲဒီ့ တစ်ယောက်ယောက်အပေါ် မှီခိုနေသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲ့တော့ အဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကပဲ ကိုယ့်ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လည်း လုပ်နိုင်။ စိတ်သောက ဖြစ်အောင်လည်း လုပ်နိုင်သွားပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေအားလုံး သူ့လက်ထဲကို ဝကွက်အပ်လိုက်သလိုပါ။ သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို တစ်ယောက်ယောက်လက်ထဲမှာ ရှိနေတာဟာ အဓိပ္ပာယ်ကော ရှိရဲ့လား?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် မထားနိုင်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနေရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်က ကိုယ်ဘာ့သာ ထမင်းမစားနိုင်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က ထမင်းခွံနေရသလိုပါပဲ။
တကယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိမနေသင့်ဘူးလား? သင့်မှာ သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်မယ့် သင်ရှိပါတယ်။ သင့်ကို ပျော်အောင်ထားနိုင်မယ့် သင်ရှိပါတယ်။ သင့်ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးထားရမယ့် သင်ရှိပါတယ်။ အခုကစပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်တွေကို သင့်လက်ထဲမှာပဲထားပါ။ သင့်အနီးနားကလူတွေကိုလည်း ဝေမျှပါ။
"သင့်ကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ပါစေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့်တော့ သင် စိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့။"